दुनियाँको एक कहालीलाग्दो मृत्युले अत्यन्तै भावुक बनायो एक छिन समय दिएर पढ्नु होला - ABNews Nepal
दुनियाँको एक कहालीलाग्दो मृत्युले अत्यन्तै भावुक बनायो एक छिन समय दिएर पढ्नु होला
Aug 22, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, alif Khan, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, ganga lama, headline nepal, katathmandu news, latest khabar, latest nepali song, latest news chitwan, latest news nepal, latest ramailo samachar, taja khabar nepal, tajakhabar
आफू सामान्य बिरामी भएको खबर कामले नेपालगन्ज गएका श्रीमानलाई पुर्‍याउछिन !,श्रीमानले गाउको मेडिकलमा उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् ! निको नहुदा आफू यतै छु काखको बच्चा मात्र ल्याएर आउ यतै उपचार गरेर जाँउला भनी नेपालगन्ज बोलाउछन उनका श्रीमानले ! अब बाँच्ने आशा सहित उनी घरको सबै चाँजोपाँजो मिलाई एक दुधे बालक काखमा च्यापेर एक्लै नाइट बस चड्छिन उनी !
गाडीमा चिनेको मान्छे कोहि नहुदा काखको बालकलाई नै आफ्नो रात्रिकालिन यात्राको साथी अनि बिरामी अबस्थाको साहारा सम्झदै यात्रा गरिरहेकी हुन्छिन ! बिच बाटामा उनिलाइ उल्टि हुन्छ !
वरपरकासबै सिटका मान्छेहरु मस्त निद्रामा हुन्छन् ! उनी आत्तिन्छिन र काखको बच्चालाई ओल्टाइपल्टाई बिउझाउने कोसिस गर्दा पनि उ बिउझिदैन !,
उनलाई उकुसमुकुस हुन्छ र सोच्छिन कि बाटामा मलाई केही भैहाल्यो भने यो काखको छोरा’ फेरि बच्चालाई उठाउने कोशिश गर्दा गर्दै उनलाई अन्तिम अबस्थाले च्याप्दै जान्छ र अम्तिम तागतले बच्चालाई दूध चुसाउदै भोलि बिहान सम्म बाँच्न सकु र काखको छोरालाई बुबाको जिम्मा लगाउन पाउ भन्ने कामना सहित छटपटाउदा छटपटाउदै आफू सधैको लागि निदाउछिन !
बच्चा रुन थाल्छ र आसपासका सिटका मान्छेहरु बिउझेर उनलाई उठाउन खोज्दा उनी सधैको लागि निदाइसकेकी हुन्छिन !सबैले बच्चा नराम्रोसँग चिच्याएको देखेर उनलाई बोलाउन खोज्छन्। बोलाउँ छन् तर उनी निदाइरहेकी हुन्छिन्।नजिकै गएर बोलाउँदा समेत नबोलेपछी मानिसहरू जान्छन् तर उनी कहिले नब्युँझिने गरि चीर निद्रामा पुगिसकेकी हुन्छिन्।
हाँस्य कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ “बल्छी-धुर्बे” र श्रीमती करुणा खड्कालाई पुत्रलाभ भयको छ।
प्रेमिकाले आफ्नै प्रेमी को घरमा गएर झु*,न्डिएर मरे तर मा,रेको हो भन्छन् हेर्नुस्